စက်ကိရိယာထုတ်ပိုး,အလျားလိုက် Flow wrapper,အလိုအလျောက်နို့တိုက်ကျွေးစက်လိုင်းစက်ရုံထုတ်လုပ်သူ
အလိုအလျောက် Pack လိုင်း
Servo Pack စက်
30 အစားအသောက်ထုပ်ပိုးစက်ပစ္စည်း၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အနှစ်, တစ်ဦးပြည့်စုံကုန်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းနှင့်အတူ 4,000 စတုရန်းမီတာထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်း
ဒါဟာထုတ်ကုန်နည်းပညာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အရန်ဒီဇိုင်းအဘို့ခိုင်ခံ့ထောက်ခံမှုများကိုတစ်ဦးနည်းပညာဆိုင်ရာစင်တာရှိပါတယ်. ဒါဟာ CNC ခုံရှိပါတယ်, ဒေါင်လိုက်စက်စင်တာများ, CNC လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်တွေနဲ့အခြားပစ္စည်းကိရိယာများ.
7*24-နာရီဖြေရှင်းချက်ယန္တရား, အမြဲသင့်ရဲ့အခွင့်အရေးနှင့်အကျိုးစီးပွားများကိုကာကွယ်ပေး, ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်, အော်တိုမောင်းသူမဲ့ထုပ်ပိုးထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
ဒေါင်လိုက်ပူးတွဲစက်ရုပ်တစ်ခုလုံးကိုအဖွဲ့အစည်းကိုကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖြစ်ပါသည်, မြင့်မားသောထပ်ခါတလဲလဲ positioning ကို၏အားသာချက်များနှင့်အတူ, အနိမ့်ပျက်ကွက်မှုနှုန်း, ရိုးရှင်းစစ်ဆင်ရေး, ထိုသို့ဘတ်စ်ကားထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်, သေးငယ်တဲ့ဧရိယာကိုဖုံးအုပ်ထား, နှင့်လက်ရုံးတော်ကိုအရှည် 500-1000mm ဖြစ်ပါသည်, နှင့်ဝန်စွမ်းရည်မှတက်ဖြစ် 10 ကီလိုဂရမ်, ထိုသို့ကျယ်ပြန့်အစားအစာကိုစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်, ဆေးဝါးစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်အခြားပစ္စည်း sorting နှင့်ဖယ်ရှားခြင်း. TFD-SR400 မြန်နှုန်းမြင့်၏အားသာချက်များရှိပါတယ်, မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်, မြင့်မားသောတိများနှင့်အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်. embedded-type အမျိုးအစား drive ကိုထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာနှင့်အတူ, ကသေးငယ်တဲ့ဧရိယာဖုံးလွှမ်း, နှင့်၎င်း၏လက်မောင်းအရှည်ဖြစ်ပါသည် 400 (600), နှင့်၎င်း၏ဝန်စွမ်းရည်မှတက်ဖြစ်3ကီလိုဂရမ်, ထိုသို့ကျယ်ပြန့်အစားအစာကိုစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်, ဆေးဝါးစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်အခြားပစ္စည်း sorting နှင့်ဖယ်ရှားခြင်း.
ထုပ်ပိုးသည် TFD-CZ500 စက်ရုပ်
FD-SR400 (600) four-ဝင်ရိုးတန်းပူးတွဲစက်ရုပ်
Delta Pick-and ရာဌာနစက်ရုပ်
နှစ်ချက်အကြိမ်ရေ converter, variable ကိုမြန်နှုန်း, အဆိုပါထုပ်ပိုးအမြန်နှုန်းနှင့်အိတ် length.With High-တိများနှင့်မြင့်မားသောအထိခိုက်မခံလျှပ်စစ်မျက်စိခြေရာခံသည့်စနစ်ထိန်းညှိဖို့ screen.Easy -chip အဓိကထိန်းချုပ် system.easy လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိတွေ့ maintain.single ရန်လွယ်ကူ, တိကျစွာထုပ်ပိုးပစ္စည်းများအများအပြားအမျိုးမျိုးများအတွက်ထုတ်ကုန် position.Suitable ထိန်းချုပ်ဖို့, လှပတင်းကျပ်စွာ sealing.Optional devices များ : ပုံနှိပ်စက်、device ကိုပက်ဖြန်းနိုက်ထရိုဂျင်အားသွင်းစက်ကိရိယာနှင့်အရက်.
သုံး servo မောင်းနှင်မှု, motion control system ကို CPU ကို. နှစ်ချက်ရုပ်ရှင်လိပ်, dual လိပ်ရုပ်ရှင် splice function ကို, အဆိုပါထုပ်ပိုးအမြန်နှုန်းနှင့်အိတ်အရှည်ကိုထိန်းညှိဖို့ရုပ်ရှင်လဲလှယ် time3.Man-စက် interface နဲ့ parameter သည် setting ကိုများနှင့်အဆင်ပြေလျှော့ချရန်နှင့် quick.Easy. High-တိများနှင့်မြင့်မားသောအထိခိုက်မခံလျှပ်စစ်မျက်စိခြေရာခံသည့်စနစ်နှင့်အတူ, တိကျစွာ position.Independent ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများအများအပြားအမျိုးမျိုးများအတွက်အပူချိန်ကိုထိန်းချုပ် system.Suitable ပိတျထားသောထုတ်ကုန်ထိန်းချုပ်ဖို့, လှပတင်းကျပ်စွာ sealing.Anti-ဖြတ်တောက်ပစ္စည်း, standby function ကို product.Fault Self-ရောဂါမရှိဘဲ & function.Optional devices တွေကိုဖယ်ရှားပစ်: ပုံနှိပ်စက်、device ကိုပက်ဖြန်းနိုက်ထရိုဂျင်အားသွင်းစက်ကိရိယာနှင့်အရက်.
TFD-320DS Dual-Splice Flow wrapper
TFD-380DS Dual-Splice Flow wrapper
TFD-480DS Dual-Splice Flow wrapper
အားလုံး Dual-Roll ထုပ်ပိုးစက် View
အလိုအလျောက် turntable နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်ထုတ်ပိုးစက်လိုင်းစားစရာဘို့အဓိကအားသက်ဆိုင်သောဖြစ်ပါသည်, နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များကို, ဓါတုဗေဒ, နှစ်ထပ်ကိန်း၏ဂီယာစီစဉ်ခြင်းနှင့်စစ်ခင်းကျင်းဖို့ဆေးဝါးနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ, ပတ်ပတ်လည်, ချွတ်နှင့်အခြားထုတ်ကုန်များ.
Loading စက်ရေတွက် TFD-ZT300Automatic
TFD-ZT250 အလိုအလျောက် Tray ထဲက Pack နို့တိုက်ကျွေး
TFD-ZT200 အပြည့်အဝအလိုအလျောက်စာကျွေးခြင်းနှင့် Tray ထဲက Loading
TFD-ZP350 အလိုအလျောက် Turntable စာကျွေးခြင်းနှင့်ထုပ်ပိုးစက်လိုင်း
TFD-ZT100 စက်လိုင်းထုပ်ပိုး semi-automatic ကျွေးမွေး Tray ထဲမှာ
TFD-XC3 Down ပြီးတော့ Up ကိုအလိုအလျောက်စာကျွေးခြင်းနှင့်ထုပ်ပိုးလိုင်း
TFD-CF4 ဘေးထွက်အလိုအလျောက် Sorting နဲ့ package စက်လိုင်းနို့တိုက်ကျွေး
တရုတ်ပေးသွင်းသူမှအပြည့်အဝအလိုအလျှောက် KN95 Medical မျက်နှာဖုံးထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်း
တရုတ်စက်ရုံမှအပြည့်အဝအလိုအလျောက် KN95 မျက်နှာဖုံးထုတ်လုပ်သည့်စက်ကိုတင်ပို့သည်
တဖြေးဖြေး 1+2 တရုတ်စက်ရုံရှိအလိုအလျှောက်မျက်နှာဖုံးလုပ်စက်
စက်ရုံစျေးနှင့်အတူ Semi-Auto မျက်နှာဖုံးစက်ကိုထုတ်လုပ်သည်
စက်ရုံမှတိုက်ရိုက်ရောင်းအား Semi-automatic Mask Earloop စက်
အရည်အသွေးမြင့်မားသောမျက်နှာဖုံး Flow Packing Machine
TFD-D320S စားနပ်ရိက္ခာထုပ်ပိုးစက် Down စက္ကူ Flow wrapper
TFD-ZT250 အလိုအလျောက် Tray ထဲက Pack စက်လိုင်းနို့တိုက်ကျွေး
Foshan Tefude Automation သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်
Foshan TEFUDE Automation သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်, Ltd မှလွတ်လပ်သောထုပ်ပိုးပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အလိုအလျောက်အလယ်တန်း-ထုပ်ပိုးပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အထူးပြုတဲ့ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ပါသည်.
Adress: မြေညီထပ်,အဆောက်အဦး 7, Changfu စီးတီးကို Creative စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များပန်းခြံ, အမှတ်2Xiaoxian လမ်း, Luocun,Shishan မြို့, Nanhai ခရိုင်, Foshan စီးတီး, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်နိုင်ငံ
E-mail ကို: tefudesally@tefude.com
အနိမ့်ဆုံး FOR ယနေ့ငါတို့ကိုဆက်သွယ်ပါ 20% လျှော့စျေး
မူပိုင်ခွင့်© 2020 Foshan Tefude Automation သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ မူပိုင်ခွင့်များ.
wechat QR ကုဒ်ကို x က ပိတ်